အမူ့တော် – Grab Love Story
ဖွင့်ထားသော အဲကွန်းကြောင့် အခန်းတစ်ခုလုံးအေးစိမ့်နေသည်။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းကား ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်သည်။ ၀ိုင်းဝန်းပြီး အိစက်နေသော တင်ပါးများကဆိုဖာပေါ်တွင်ပိပြားပြီးမြုပ်ဝင်သွားသည်။ သိမ်ကျင်သောခါးကြောင့် သူမတင်ပါးအလှများကပိုပေါ်လွင်သွားသည်။ အသက်(၃၀)ကျော်နေပြီဖြစ်သော်လည်း လှပလှသော သူမတင်သားရင်သားများနှင့်ချောမောလှပသော ရုပ်ရည်ကြောင့် မြင်သူတိုင်းက (၂၅)နှစ်ခန့်ဟုသာထင်မြင်ကြသည်။ သူမရောက်ရှိနေသော နေရာကား တရုတ်ပြည်မှာဖြစ်သည်။ တရုတ်သူဌေးတစ်ယောက်၏ မယားငယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသားခံယူထားသဖြင့် တရုတ်ပြည်ကြီးတွင်ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူတရုတ်သူဌေးကား သူမကိုကောင်းကောင်းထားသည်။
ငွေကြေးဆိုလျင်လည်းသုံးမကုန်အောင်ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ ပထမက သူမလူကုန်ကူးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရသည့်သူဌေးကသဘောကောင်းသဖြင့်သူမလည်းကံကောင်းခဲ့သည်။ သူမညီမများဖြစ်သူ ချိုဇင်ဝင်းကိုပင် ခေါ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီ။ ချိုဇင်ဝင်းကား အသက်(၁၈)နှစ်ခန့်ရှိပြီ။ သူမလိုပင်ရုပ်ရည်ချောမောလှပသည်။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းရဲ့ခင်ပွန်းကား တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ ကုမ္ပဏီရှိပြီး မယားကြီးလည်းရှိသည်။ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းထံသို့ (၄)လလောက်မှတစ်ခါခန့်ပြန်လာတတ်သည်။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းကား ငယ်စဉ်က သူမရည်စားဖြစ်သူမှ သူမအချစ်ကိုအသုံးချပြီး လှည့်စားကာ တရုတ်ပြည်ခေါ်လာကာ တရုတ်မယားအဖြစ်ရောင်းစားခြင်းခံခဲ့ရသဖြင့် မြန်မာယောင်္ကျားတွေကိုစိတ်နာသွားခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူမလူကုန်သည်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်မှ အဆက်အသွယ်များဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်ခေါ်လာပြီး တရုတ်မအိမ်ထောင်သည်များထံတွင် ဈေးကောင်းကောင်းဖြင့် ကျွန်အဖြစ်ရောင်းချသည့်အလုပ်ကိုလုပ်ကာ ငွေမြောက်များစွာရခဲ့သည်။ ထိုသို့….မိန်းမများထံတွင် ကျွန်ခံခိုင်းသော ဘ၀ကိုပို့ပေးရခြင်းကို သူမကလည်းများစွာနှစ်ထောင်းအားရဖြစ်လှသည်။ ထိုယောင်္ကျားလေးများသည် တရုတ်မအိမ်ထောင်ရှင်များ၏ နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရပြီး ထိုမိန်းမတွေရဲ့ ချီးကျွေးလျင်ပင် မငြင်းဘဲစားရမည့် ကျွန်ဘ၀သို့ရောက်နေတာကိုပျော်ရွှင်မိသည်။ သူမကလည်းညှာတာတတ်သောသူများထံမရောင်းဘဲ.. ရက်စက်ပြီးမစာမနာခိုင်းစေတတ်သူများထံကိုမှ ရွေးပြီးရောင်းချသည်။ ဒီလိုရောင်းချခြင်းအားဖြင့် အရှင်လတ်လတ်လောကငရဲရောက်သလိုခံစားရမှာလေ.။ သူမအနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လက်စားချေခွင့်ရသလို ခံစားရသည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကား ခေါင်းအုံးနှစ်ခုကို ဆင့်ကာ ကျောမှီပြီးမွေ့ယာပေါ်တွင် ပေါင်ကိုအသာကားပေးထားသည်။
လက်တစ်ဖက်တွင်ကား သူမထမိန်အောက်တွင် ၀င်နေသောကောင်လေး၏ လည်ပင်းမှာပတ်ပေးထားသည့် လည်ပတ်ကြိုးကိုကိုင်ထားသည်။ ကောင်လေးခေါင်းကားသူမထမိန်အောက်တွင်တလှုပ်လှုပ်နှင့်။ သူမဘယ်လက်က ထမိန်အပေါ်မှလက်ရှိုနှိုက်ပြီး ကောင်လေးရဲ့ဆံပင်တွေကို အတင်းဆုပ်ကာ ကိုင်ထားသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သူမမျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့သွားပြီး ကောင်လေးခေါင်းကိုဆုပ်ကိုင်ထားသော ဆံပင်များကိုလွတ်ပေးလိုက်သည်။ ထမိန်ကိုအသာဟပေးလိုက်ချိန်မှာချွေးများကျဆင်းပြီး မောပန်းနေသော ဖြူဖြူချောချောကောင်လေးရဲ့မျက်နှာကပေါ်လာသည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ စောက်ရည်တွေကကောင်လေးပါးစပ်မှာပေပွနေသည်။ ကောင်စုတ်…နင့်အလုပ်မပြီးသေးဘူးလေ…ထမိန်အောက်ပြန်ဝင်စမ်း… အသားနာချင်ပြီထင်တယ်…။ဖင်ကြားထဲကျသွားတဲ့စောက်ရည်တွေကိုနင့်လျှာနဲ့လိုက်သန့်ရှင်းလေ.။ ထွေးထုပ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့။ ဟုတ်ဟုတ်.ကောင်လေးကားကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နှင့်ပင် ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ပေါင်ကြားထဲကိုခေါင်းကိုပြန်အပ်လိုက်သည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့စောက်ပတ်နဲ့ဖင်ခွကြားမှာပေပွနေတဲ့စောက်ရည်တွေကို ခွေးတစ်ကောင်လို သူ့လျာနဲ့တပြတ်ပြတ်ယက်ပေးတာကို ကျော့ကျော့လှိုင်ကဇိမ်ယူနေပါတယ်။ တူတူ..အိပ်ယာဘေးနားမှချထားတဲ့ ဟန်းဖုန်းကမည်လာတာကြောင့် ကျော့ကျော့လှိုင်က ဖင်ယက်ခံနေတဲ့အနေအထားကနေဘဲဖုန်းကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ ဟဲလို..ကျော့ကျော့လား…။တစ်ဖက်မှဒေါ်သန်းသန်းဝင်းရဲ့အသံကိုကြားရပါတယ်။ ပြော…မမ…ဘာကိစ္စ… ဟင်း..ညဉ်းကလည်းမေးနေရသေးတယ်…ညဉ်းဆီမှာကောင်လေးအသစ်တွေရောက်တယ်ကြားလို့။ ခ်ခ်..သတင်းအနံ့ခံကကောင်းတယ်နော်ငါ့အမက။ တော်ပါအေ..ညဉ်းကပစ္စည်းကောင်းလေးတွေဆိုညဉ်းခိုင်းလို့ဝမှလွတ်ကြားလား။ သြော်…ဒါတော့ငါ့အမရယ်..တန်အောင်လို့ပါ…။ ဟုတ်ပါပြီအေ..ဟုတ်ပါပြီ..ဘယ်တော့ပို့မှာလဲ…။ မကြာပါဘူးငါ့အမရဲ့ သူတို့ကို သခင်မတွေရဲ့အမိန့်နာခံတတ်အောင်သင်ပေးရသေးတာ။ ဟုတ်ပါပြီအေ…ညဉ်းလာရောင်းမဲ့နေ့ဖုန်းဆက်လိုက်.ဟုတ်ပြီလား..။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းကားသူမကို ညူစူသံနှင့်ပြောပြီးဖုန်းချသွားလေသည်။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းနှင့်ဖုန်းပြောပြိးနောက် ကျော့ကျော့လှိုင်ကား သူမဖင်ကိုကောင်လေးယက်တာကို (၅)မိနစ်ခန့်ဆက်ပြီးအရသာယူနေလိုက်သေးသည်။
ထို့နောက်စောက်ပတ်ကိုပြန်ယက်ခိုင်းပြီးတစ်ချီပြီးသွားသောအခါ သူမအနည်းငယ်အားရသွားသည်။ ဆီးအိမ်ထဲမှကျင်သလိုလိုဖြစ်လာသည်။ သေးပေါက်ချင်လာသဖြင့် ထမိန်ကိုဟပေးလိုက်သည်။ ကောင်လေးကား ထမိန်အောက်မှထွက်လာပြီး သူမပေးမည့်အမိန့်အသစ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ ကဲ..ဟိုကောင်နားတော့ အိမ်သာထဲလိုက်ခဲ့…နင့်ပါးစပ်ကိုငါဆေးပေးမယ်.. ကောင်လေးကား မျက်နှာငယ်လေးနှင့်ဖြစ်နေသည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကားအသက်(၂၀)ကျော်ကျော်ခန့်..သူနှင့်ဆိုအသက်သိပ်မကွာ..။ သို့သော် ကျော့ကျော့လှိုင်ကား လူကုန်သည်ဂိုဏ်းမှ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပီပီ တရုတ်ပြည်တွင် သူ့ကိုရောင်းစားရန် ကျွန်အဖြစ် ၀ယ်ယူထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် သူ၏သခင်မဖြစ်နေသည်။ မထင်လျင်မထင်သလို မကျော့ကျော့လှိုင်က စီးတဲ့ဖိနပ်နှင့်ပါးကွဲအောင်ရိုက်တတ်သောကြောင့် ကျော့ကျော့လှိုင်ကိုအရမ်းကိုကြောက်ရွံ့နေမိသည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်က ကုတင်ပေါ်မှဆင်းပြိး သူ့အပေါ် ခွရပ်ကာထမိန်ကိုပြင်ဝတ်နေသည်။ သူကားကိုယ်လုံးတီးဂွေးတန်းလန်းဖြင့် ခွေးတစ်ကောင်လိုလည်ပင်းမှာလည်ပတ်ကြိုးကတပ်ခံထားရသေးသည်။ ဟဲ့…ငါ့ခွေးလိုက်ခဲ့စမ်း..ဆိုပြီး ကျော့ကျော့လှိုင်က ကောင်လေးလည်ပင်းမှသံကြိုးကိုဆွဲကာ အိမ်သာဖက်သို့ခေါ်သွားတော့သည်။ ကောင်လေးကား မကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ လည်ပတ်ကြိုးဆွဲခေါ်ရာကိုခွေးတစ်ကောင်လိုလေးဖက်ထောက်အနေအထားနဲ့ လိုက်ခဲ့ရင်းယမ်းခါနေတဲ့ဖင်သားကြိးတွေကို နောက်ကနေ မော်ဖူးနေရပါတယ်။ အိမ်သာထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျော့ကျော့လှုိုင်ကကောင်လေးကို ကဲမင်းခေါင်းကို အိမ်သာခွက်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်ပြီးပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဟထား၊ငါသေးပေါက်ထည့်မလို့ဆိုပြီး အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေးကား ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ စောက်ပတ်ထဲကသေးတွေကို ပါးစပ်ထဲပေါက်ထည့်ခြင်းခံရမှာသိတာကြောင့် မျက်နှာငယ်လေးဖြစ်သွားတာကို ကျော့ကျော့လှိုင်သတိထားမိပါတယ်။ အသားမနာချင်နဲ့ နင့်ပါးစပ်ကငါ့သေးခွက်လုပ်မှာ ပက်လက်လှန်ထား.ဆိုတာကြောင့် ကောင်လေးလည်းကြောက်ပြီး အိမ်သာခွက်ပေါ်ခေါင်းတင်ကာပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဟထားလိုက်ပါတယ်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကလည်း ထမိန်ကိုပင့်ပြီး ကောင်လေးမျက်ခွက်ပေါ်ကားယခွလို့ ကောင်လေးပါးစပ်ကို စောက်ပတ်နဲ့သေချာတည့်ပြီး အာခေါင်ထဲကိုဝါကျင်ကျင်သေးရည်တွေကိုပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အဟွတ်..အဟွတ် အာခေါင်ထဲကို စောက်ဖုတ်ထဲကသေးတွေအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပန်းထုတ်ခံရတာကြောင့် ကောင်လေးသီးသွားပါတယ်။သေးတွကကောင်လေးပါးစပ်ထဲကနေ ဘေးနှစ်ဖက်ကိုလျှံကျလာပါတယ်။ကျော့ကျော့လှိုင်ကသေးပေါက်တာကို အနည်းငယ်အောင့်ထားပြီး..။
နင်ငါ့သေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်း ငုံပြီးအရသာခံပြီး မြိုချစမ်း။ ကောင်လေးကား ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ ဆားငံရေလိုငံကျိပြီး နံစော်နေတဲ့သေးရည်တွေကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့မြိုချနေရပြိး ကျော့ကျော့လှိုင်က သေးလက်ကျန်တွေကို ကောင်လေးပါးစပ်ထဲပန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ သေးပေါက်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ရေပန်းကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီး စောက်ပတ်နဲ့ဖင်တွေကိုသန့်ရှင်းသွားအောင်ပွတ်ဆေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာလည်းကောင်လေးကိုပါးစပ်ဟခိုင်းထားပြီး သူမစောက်ပတ်နဲ့ဖင်ကိုဆေးတဲ့ရေကိုသောက်သုံးခိုင်းပါတယ်။ ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ သူမကကောင်လေးလည်ပင်းကခွေးလည်ပတ်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ နင့်ကိုခိုင်းစရာရှိသေးတယ်…ဆိုပြိးအခန်းထဲပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ အခန်းထဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်လေးကို ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လှန်စေပြီး ခြေတွေလက်တွေကို ကုတင်တိုင်တွေမှာ ကြိုးတွေနဲ့မလှုပ်နိုင်အောင်ပူးချည်လိုက်ပါတယ်။ သူမက အ၀တ်ဟောင်းခြင်းထဲမှာပစ်ထဲ့ထားတဲ့ သူမပင်တီတစ်ထည်ကို ယူလိုက်ပြီး ကောင်လေးကိုပါးစပ်ဟခိုင်းပြီး ပင်တီကိုလုံးပြီး ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့သူမ၀တ်ထားတဲ့ထမိန်ကို ချွတ်ပြီး ကောင်လေးခေါင်းကို စွပ်လိုက်ပါတယ်။ ပါးစပ်ထဲပင်တီထိုးထည့်ထားပေးတဲ့အပြင် ပင်တီကိုပါပါးစပ်ထဲထိုးထည့်ထားတာကြောင့် ကောင်လေးဟာလေကိုမနည်းရှုနေရတဲ့အပြင် သူမရဲ့ဖင်နဲ့စောက်ပတ်နံ့တွေကိုပါ ခံစားနေရတာသေချာနေပါတယ်။ ကျော့ကျော့လှိုင်က ကောင်လေးလီးကိုကိုင်ပြီးဆွလိုက်ပါတယ်။ လီးကမိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လက်နဲ့ဆွပေးတာဖြစ်တာကြောင့် တဆတ်ဆတ်နဲ့တုန်နေပြီး လရေတွေပန်းထွက်ကုန်ပါတယ်။ ကျော့ကျော့လှိုင်က ဗိုက်ဘရေတာကိုယူပြီး ပလပ်ပေါက်မှာထိုးလိုက်ပါတယ်။ မွတ်နေအောင်လည်နေတဲ့ဗိုက်ဗရေတာနဲ့ ကောင်လေးရဲ့လီးထိပ်ကို တို့နေပါတယ်။
ကောင်လေးဟာ လီးထိပ်ဖျားက အရမ်းကိုကျင်တာကြောင့် အရေတွေတစိမ့်စိမ့်နဲ့ပန်းထွက်နေပြီး ချည်ထားတဲ့ကြိုးတွေကိုလွတ်လိုလွတ်ငြားရုန်းကြည့်ပေမဲ့ သေသေချာချာချည်ပေးထားတာကြောင့်မလွတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးကျော့ကျော့လှိုင်က သူမကျွန်လေးရဲ့ မိန်းမမလိုးဖူးသေးတဲ့ အသစ်ကျပ်ချွတ်လီးကြီးကို သူမစောက်ပတ်နဲ့တေ့ပြီးကေဆောင့်ပါတော့တယ်။ မာကျောတင်းမာနေတဲ့လူပျိုလီးကြိးအရသာကို ကျော့ကျော့လှိုင်က အပီကိုခံစားနေပါတယ်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့စောက်ပတ်ညှစ်အားရယ် အသက်ကိုခဲခဲယဉ်းယဉ်းရှုနေရတာရယ်ပေါင်းပြီး ကောင်လေးကတော့မျက်ဖြူလှန်မတတ်ပါဘဲ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျော့ကျော့လှိုင်စောက်ပတ်ထဲက စောက်ရေတွေ သူ့ဆီးခုံပေါ်ကျဆင်းလာတဲ့ အခါမှသာသူအနားရသွားပါတော့တယ်။ အဟွတ်အဟွတ်.သူ့ခေါင်းကိုစွပ်ထားတဲ့ ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ထမိန်ကို ဆွဲဖြုတ်ပေးပြီး ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ပါးစပ်ထဲကဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်လေးဟာ သီးသွားတာကြောင့် ချောင်းပါဆိုးသွားပါတယ်။ ကျော့ကျော့လိုက်က ကုတင်ပေါ်ကနေထာသွားပါတယ်.။ကောင်လေးကိုတော့ကြိုးတုပ်ထားတုန်းပါဘဲ။ သူမကဘီရိုကိုဖွင့်လိုက်ပြီး ဘီရိုထဲကပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ရော်ဘာလီးတုတစ်ချောင်းပါ..သူမကကုတင်ဆီကိုပြန်လာပြီး… ဟိုကောင်ဒီလီးတုကို နင့်သွားနဲ့မယိုင်အောင်ကိုက်ထားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ သခင်မကျော့ကျော့အမိန့်ကို မလွန်ဆန်ရဲတာကြောင့် လီးတုကို သွားနဲ့ မယိုင်အောင်ကိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းနဲ့ထိန်းကာ ထောင်ပေးထားရပါတယ်။ သခင်မကျော့ကျော့လှိုင်ဟာ ထိုလီးတုကို သူမစောက်ပတ်နဲ့တေ့ပြီး ဆောင့်ချပါတယ်။ ကောင်လေးကတော့ သွားတွေနာကျင်လှတဲ့အပြင် စောက်ပတ်ကလီးသူအဆုံးထိဆောင့်ချတိုင်း စောက်ပတ်နဲ့ နှုတ်ခမ်းနဲ့သာမက ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ဖင်ကြိးတွေက သူ့မျက်နှာကို တဘုတ်ဘုတ်နဲ့ ဖိဖိချခြင်းကိုခံရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတေ့ ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့စောက်ရည်တွေဟာ သူ့မျက်နှာပေါ်ကို ကျဆင်းပြီး ကျော့ကျော့လှိုင်က သူမဖင်နဲ့ သူ့မျက်နှာကိုဖိထိုင်ပြီး အမောဖြေနေပါတော့တယ်.။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကားသူမစောက်ပတ်နှင့်ဖင်ကြားတွင်ပေပွနေသောစောက်ရည်များကို ကောင်လေးလျှာဖြင့်ပြောင်နေအောင် ယက်ခိုင်းပြီးသန့်ရှင်းခိုင်းလိုက်ပြီးနောက် ကြိုးများကိုဖြုတ်ပေးလိုက်သည်။ ကောင်လေးကို ကုတင်အောက်ဆင်းခိုင်းလိုက်သည်။ ကုတင်ခြေရင်းမှာ ကောင်လေးကိုဒူးထောက်ခိုင်းထားလိုက်သည်။ ဟဲ့..ငါခြေသည်းနီဆိုးမလို့ ငါ့ခြေချောင်းတွေကညစ်ပတ်နေတယ်..။ ကောင်လေးကားရုတ်တရက်ဆိုတော့ကြောင်သွားသည်။ ကဲ..နင်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးလား….ငါ့ခြေချောင်းတွေ ခြေဖ၀ါးတွေကို နင့်ပါးစပ်နဲ့စုပ် လျှာနဲ့ယက်ပြိး ချေးညှော်တွေပြောင်နေအောင် သန့်ရှင်းပေးစမ်းဆိုပြီး ကုတင်ပေါ်မှ ခြေဆင်းထိုင်ပြီး ဒူးထောက်နေသော ကောင်လေးပါးစပ်နားသို့ ဖြူအုနေသော သူမခြေထောက်များကို ထိုးပေးလိုက်သည်။
နေဦးမစုပ်ခင် မင်းငါ့ခြေမဖိုးကို နမ်းစမ်းလို့ ဆိုလိုက်သဖြင့် ကောင်လေးကား သူမခြေဖမိုးများကို မျက်နှာအပ်ပြီးနမ်းလိုက်ရသည်။ ပြီးနောက် သူမခြေချောင်းလေးများကို ကောင်လေးပါးစပ်ကိုဟထားစေပြီး ခြေချောင်းများကို ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ခြေချောင်လေးများကား ဖြူဖွေးပြီးသွယ်လျနေသဖြင့် ကောင်လေးမှာလည်း ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ ခြေထောက်ကိုကိုင်ပြီး တပြွတ်ပြွတ်ယက်စုပ်တော့သည်။ ခြေချောင်းခွကြားများကိုဖြဲပြီး ခြေချောင်းခွကြားမှာကပ်နေသော ဖုန်များကိုကင်းစင်သွားအောင် သူ့လျှာဖြင့်သန့်ရှင်းပေးရသလို ခြေဖ၀ါးကိုလည်း လျှာဖြင့် ဖြူဝင်းနေအောင်ယက်စုပ်ပေးရသည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်က..နောက်ခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုထိုးပေးလိုက်ရာကောင်လေးကလည်း ပထမခြေထောက်အတိုင်းပင် ပြောင်စင်နေအောင်ယက်ပေးရပြီး ခြေထောက်မှအညစ်အကြေးများကို ထွေးခွင့်မပေးပဲမြိုချခိုင်းလိုက်သည်။ ကဲတော်ပြီ မင်းဒီနားမှာ ပက်လက်လှန်နေဆိုပြီး ကုတင်အောက်တွင်ပက်လက်လှန်ခိုင်းထားကာ ခြေသည်းနီဆိုးရန် ဆိုးဆေးပုလင်းကို အိပ်ယာဘေးနားစင်ပေါ်မှယူလိုက်သည်။ ထို့နောက် ကုတင်အောင်တွင် ပက်လက်လှန်နေသော ကောင်လေးမျက်နှာပေါ်သို့ သူမခြေဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကိုတင်ထားကာ သူမခြေသည်းလေးများကို ခြေသည်းနီဆိုးနေတော့သည်။ ကောင်လေးကား သူမကျွန်တစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့် သူမခြေတင်ခုံသဖွယ် သူမအလိုကျအမှုထမ်းနေရတော့သည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကား ကောင်လေးခြေထောက်ယက်စုပ်ပေးတာကိုခံရင်း သူမဘ၀ကိုစဉ်းစားနေပါတယ်။ တကယ်တော့သူမဒီလိုရက်စက်တတ်သွားတာဟာ သူမငယ်ဘ၀ကဒဏ်ရာတွေကြောင့်ပါ.။ အခုသူမကျွန်အဖြစ်ခိုင်းစေပြီး နောင်တစ်ချိန်မှာ တစ်ဖက်နိုင်ငံက သူဌေးမကြီးဒေါ်သန်းသန်းဝင်းနဲ့ညီမဖြစ်သူချိုဇင်ဝင်းတို့ထံမှာ ကျွန်အဖြစ်ခိုင်းစေရန်ရောင်းစားဖိုရရည်ရွယ်ထားတဲ့ကောင်လေးဟာ.. ဦးသိုက်မောင်းနဲ့ဒေါ်ဇင်မာတို့ရဲ့ တူတော်ပါတယ်။ သူမထံမှာ ကျွန်အဖြစ်စေခိုင်းလို့ဝရင်ရောင်းမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့အတွက် သူမအရမ်းကိုဝမ်းသာကျေနပ်နေမိပါတယ်။ သူမဘ၀ကငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘမရှိခဲ့ပါဘူး။ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာနေခဲ့ရပြီး တစ်နေ့ကျတော့ ဦးသိုက်မောင်းနဲ့ဒေါ်ဇင်မာဆိုတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက်က..သူမကိုမွေးစားမယ်ဆိုပြီး ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်. ဦးသိုက်မောင်းနဲ့ဒေါ်ဇင်မာဟာ အများအမြင်မှာ လူကြီးလူကောင်း ဂုဏ်သရေရှိ အသိုင်းအ၀ိုင်းကပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာတော့ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးဆိုးယုတ်နေတဲ့သူတွေပါ. သူမကိုမိဘမဲ့ကျောင်းမှာမွေးစားဖို့အကြောင်းပြပြီးခေါ်လာပေမဲ့. တကယ်တမ်းတော့ သူမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ထံမှာ ကျွန်ခံခိုင်းဖို့သက်သက်ခေါ်လာခဲ့ကြတာပါ။ သူမဦးသိုက်မောင်းတို့အိမ်ရောက်ကတည်းကအရွယ်နှင့်မမျှအောင်ခိုင်းစေခံရပါတယ်။ စိတ်မထင်လျှင်မထင်သလိုရိုက်နက်ခြင်းခံရပါတယ်.။
သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ်လုံးဝမရှိပါဘူး။ ထမင်းချက်အ၀တ်လျှော်၊သန့်ရှင်းရေး စတဲ့အိမ်အလုပ်တွေကို မနက်မိုးလည်းကတည်းက ဇယ်ဆက်အောင်လုပ်ရတာပါ။ဒေါ်ဇင်မာရဲ့ပင်တီတွေကအစလျှော်ပေးရတာပါ။ လျှော်ရတာမှ ဖြူဖွေးနေအောင်လျှော်ပေးရပြီး။ လျှော်တာမပြောင်ရင်..သူမပါးစပ်ကိုဟခိုင်းပြီး ဒေါ်ဇင်မာက အ၀တ်ကိုရေညှစ်ချပြီး သူမကိုသောက်ခိုင်းတာကြောင့် အမြဲဂရုစိုက်နေရပါတယ်။ ပြီးညအိပ်တဲ့အခါမှာသူမတို့လင်မယားပေါက်ထားတဲ့ သေးခွက်ကို မနက်တိုင်ရင်သူမက သွားသွန်ပေးရပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမှားပါသွားလို့ကတော့ သူမတစ်ကိုယ်လုံးအ၀တ်တွေချွတ်ပြီး တိုင်မှာကြိုးနဲ့တုပ်ကာ ထမင်းမကျွေးရေမတိုက်ဘဲပစ်ထားပြီး အပြစ်ပေးတာလဲခဏခဏပါ။ သူမကို ညတိုင်းဦးသိုက်မောင်းတို့လင်မယား လုပ်ခိုင်းနေကျအလုပ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ထိုခိုင်းနေကျအလုပ်ကို မြင်ယောင်မိတိုင်း သူမအမုန်းတွေကပိုမိုတိုးပွားလာသလိုပါဘဲ။ ထိုခိုင်းနေကျအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့..။ ကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ကုတင်ကို ကန့်လန့်အနေအထားနဲ့ ပက်လက်လှန်ပြီးလှဲလျောင်းနေရတဲ့ ကျော့ကျော့ဟာ သူမမျက်နှာပေါ်မှာ ဒေါ်ဇင်မာရဲ့စောက်ပတ်ထဲကို ဦးသိုက်မောင်းရဲ့လီးကြီးဝင်ထွက်နေတာကို အတိုင်းသားမြင်နေရပါတယ်။ ကုတင်ကိုနှစ်လုံးဆက်ထားတာကြောင့် ဦးသိုက်မောင်းတို့လိုးနေတဲ့အောက်မှာ သူမမျက်နှာကရောက်နေပါတယ်။ ဒေါ်ဇင်မာက ကျော့ကျော့မျက်နှာပေါ်ခွလို့ ဖင်ထောင်ပေးထားပြီး ဦးသိုက်မောင်းက ကုတင်အောက်ကနေမတ်တပ်လိုးနေတာပါ။ ဖွတ်ဖွတ်…အင်းအင်း…ကိုကြီးရေ..ဆောင့်ဆောင့်…သွက်သွက်လေး…အင်းအင်း ဒေါ်ဇင်မာက ဖင်ကြီးကိုယမ်းခါနေရင်း တအင်းအင်းတအဲအဲနဲ့ပါ.. အောက်ကကောင်မညဉ်းပါးစပ်ကိုသေချာဟထားစမ်း…။ ငါပြီးတော့မယ်…ဒေါ်ဇင်မာရဲ့မာထန်ထန်အပြောကြောင့် ကျော့ကျော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပါးစပ်ကိုဟထားရပါတယ်.။ စွပ်..စွပ်..ဘွတ်..ဘွတ်..ဒေါ်ဇင်မာစောက်ပတ်ထဲကိုဦးသိုက်မောင်းလီးဝင်/ထွက်သံက ပိုကျယ်လာပါပြီး.။ စောက်ရည်ကြည်တွေနဲ့လရေကြည်တွေကြောင့်ပါ… အင်း…အင်း..အိုး..အိုး…လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးညီးညူသံနဲ့အတူ.. ဦးတိုက်မောင်းလီးကြီးက ဒေါ်ဇင်မာအဖုတ်ထဲကနေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ. ဒေါ်ဇင်မာအဖုတ်ထဲကနေ ဦးသိုက်မောင်းရဲ့လရေတွေနဲ့ဒေါ်ဇင်မာရဲ့စောက်ရည်တွေဟာ သူမပါးစပ်ထဲကိုကျဆင်းလာပါတယ်။
ကျော့ကျော့တစ်ယောက် ဒီအရေတွေကိုထွေးမထုပ်ရဲပါဘူး။ အရိုက်ခံရမှာကြောင့်လို့ပါ။ ဒေါ်ဇင်မာက အမိန့်သစ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်။ ညဉ်း..ငါ့စောက်ပတ်မှာပွနေတဲ့ အရေတွေကို သန့်ရှင်းပေးဦးလေ..ဘာလုပ်နေတာလဲ။ သောက်သုံးကိုမကျဘူး..အသားနာချင်ပြီထင်တယ်..။ ကျော့ကျော့ကြောက်ကြောက်နဲ့ဘဲ…ဒေါ်ဇင်မာစောက်ပတ်မှပေပွနေတဲ့ လရေနဲ့စောက်ရည်တွေကို သူမလျှာလေးနဲ့လိုက်ယက်ပြီး မြ်ုချလိုက်ရပါတယ်။ ကျော့ကျော့ဟာ ဒေါ်ဇင်မာရဲ့စောက်ပတ်ကိုသန့်ရှင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒေါ်ဇင်မာကကျော့ကျော့ မျက်နှာပေါ်ကနေထသွားပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းကကျော့ကျော့ရဲ့ ဆံပင်တွေကို သူ့လက်ဆွဲဆုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကောင်မထစမ်း….ဆံပင်တွေကိုဆုပ်ကိုင်ခံထားရတာကြောင့် ကျော့ကျော့လည်းထပြီး ဦးသိုက်မောင်းဆွဲခေါ်ရာနောက်ကိုပါလာပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းက ကုတင်ဘေးမှာ သူမကိုမှီစေပြီး သူ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုကုတင်ပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်။ ပါးစပ်ဟစမ်းဆိုတာကြောင့်ကျော့ကျော့ပါးစပ်ကိုဟထားရပါတယ်။ ကျော့ကျော့ရဲ့ပါးစပ်ထဲကို ဦးသိုက်မောင်းက လီးကြီးကိုထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်။ အဟု..ပါးစပ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့လီးကြီးက ရှည်လှပြီး သူမအာခေါင်ကိုထောက်သွားတာကြောင့် ကျော့ကျော့မျက်ရည်တွေဝိုင်းသွားပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းကတော့ညှာတာခြင်းမရှိပါဘူး။ ပါးစပ်ကို အငြိမ်မနေနဲ့လေကောင်မ လီးကိုမင်းလျှာနဲ့ယက်ပေး..။ ဦးသိုက်မောင်းရဲ့ အပြောကြောင့် ဦးသိုက်မောင်းရဲ့လီးပတ်လည်ကို လျှာနဲ့ယက်ပေးနေရပါသေးတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းကမျက်လုံးကြီးကိုမှေးစင်းပြီး သူမပါးစပ်ထဲကို လီးကိုထုတ်လိုက်သွင်းလုိုက်နဲ့ (၁၀)မိနစ်လောက်လိုးနေပါသေးတယ်။သူမပါးစပ်ထဲကထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ လီးကြီးက အကြောတစ်ပြိုင်းပြိုင်းနဲ့ တောင်နေပါတယ်.။ ကောင်မကုတင်ပေါ်သွားစမ်း…မင်းဖင်ကိုငါလိုးမလို့…။
ဖင်လိုးခံရမယ်ဆိုတာကြောင့် ကျော့ကျော့အရမ်းကြောက်သွားပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းခြေသလုံးကို ဖက်ပြီးတောင်းပန်တော့တာပါဘဲ။ ဦးရယ်..သမီးကို..ဖင်မချပါနဲ့သနားပါနော်….အီးဟီးဟီး… ဇင်မာရေဒီကောင်မကခေါင်းမာနေတယ်…။ ဦးသိုက်မောင်းရဲ့ မိန်းမဒေါ်ဇင်မာကလည်း ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တာနဲ့… စားပွဲပေါ်မှာဦးသိုက်မောင်း ချွတ်ထားတဲ့ သားရေခါးပတ်ကိုယူပြီး ကျော့ကျော့ လိမ့်ရိုက်တော့တာပါဘဲ။ ဖြောင်းဖြောင်း…အမလေး..သေပါပြီ…ကြောက်ပါပြီ…အန်တီရဲ့ မရိုက်ပါနဲ့တော့ရှင့်..ဖြောင်းဖြောင်း..အီးဟီးဟီး အရှိုးရာတွေထင်သွားပြီး..တဆတ်ဆတ်တုန်နေတဲ့ကျော့ကျော့ကို ဒေါ်ဇင်မာက ရိုက်ရင်းနဲ့မေးပါသေးတယ်။ ကောင်မ…နောက်တစ်ခါခိုင်းတာကိုငြင်းဦးမလား… ဖြောင်းဖြောင်း…မရိုက်ပါနဲ့တော့..အန်တီ..သမီးကြောက်လှပါပြီ…ဟင့်ဟင့် ကျော့ကျော့ကားငိုရှိုက်ရင်း ကုတင်ပေါ်ပြန်တက်လိုက်ရပါတယ်။ ဟင်းဟင်း…ညဉ်းနောက်တစ်ခါ..ခိုင်းရင်..ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြားလား.. ဟုတ်…ဟုတ်ကဲ့ရှင့်..။ ကျော့ကျော့လှိုင်က ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး လေးဖက်ထောက်က ဖင်ကိုကုန်းထားပေးရသည်။ ဒေါ်ဇင်မာက သူမရှေ့တွင်ခေါင်းအုံးနှစ်လုံးကိုဆင့်ကာကုတင်ဘောင်မှာမှီလိုက်ပြီး သူမဒူးကိုထောင်ကာပေါင်ကိုကားထားလိုက်သည်။ ပြီးတာနဲ့ ကျော့ကျော့ရဲ့ ခေါင်းကို ဆံပင်တွေကိုဆွဲဆုပ်လိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်နဲ့ကျော့ကျော့ပါးစပ်ကိုကပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ညဉ်းဦးလေး ညဉ်းဖင်ကို နောက်ကနေချနေတဲ့ အချိန်မှာ ညဉ်းလျှာနဲ့ငါ့စောက်ပတ်နဲ့ဖင်ပေါက်ကိုယက်ပေးနေ။ ငြင်းဆန်လျှင်လည်းအရေကွာအောင်ရိုက်ခံနေရမှာကို ကြောက်တာကြောင့် ကျော့ကျော့ ဒေါ်ဇင်မာရဲ့ အဖုတ်ကိုသူမလျှာကိုထုတ်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ့စောက်ပတ်ကိုဖြဲကာ ယက်ပေးနေရပါတယ်။ ရှီးအင်းအင်း..ကျွတ်ကျွတ် ဒေါ်ဇင်မာရဲ့ လက်နှစ်ဖက်က ကုတင်တိုင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပေါင်ဖွေးဖွေးကြီးနှစ်လုံးကတဆတ်ဆတ်တုန်နေတာကြောင့် သူမလျှာအရသာကို ဒေါ်ဇင်မာကောင်းကောင်း အရသာယူနေတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်။ ထိုသို့သူမဒေါ်ဇင်မာစောက်ပတ်ကိုယက်ပေးနေရတဲ့အချိန်မှာဘဲ… ဦးသိုက်မောင်းက ထောင်ထားတဲ့သူမဖင်ကိုဖြဲပြီးဖင်ပေါက်ကိုတံတွေးနဲ့ထွီခနဲထွေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့လီးကိုလည်းစားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီဗူးကိုယူပြီး ဆီနဲ့သုတ်လိမ်းနေပါပြီ။ ဖင်ချခံရမှာကိုတွေးမိပြီး ကျော့ကျော့ကြောက်လာပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းကတော့ ကျော့ကျော့ဖင်ပေါက်ကျင်းကျင်းလေးကိုလိုးရမှာကိုတွေးမိပြီး လီးကြီးကပိုတောင်လာပါတယ်။ သူ့လီးကြီးကကျော့ကျော့ဖင်ကိုတေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိမ့်ခနဲကိုဖြစ်သွားတာပါ။ ဗျစ်ဗျစ်…အမလေး..သေပါပြီ…အင်းအင်း…။
နင့်ဖင်ကိုရှုံ့မထားနဲ့လေ…ပိုနာမှာပေါ့…ဦးသိုက်မောင်းပြောစကားကြောင့် ကျော့ကျော့ဖင်ရှုံ့ထားတာကို လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းရဲ့လီးကြီးကသူမဖင်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲကို မဆံ့မပြဲတိုးဝင်သွားတော့တာပါဘဲ။ ဖင်ထဲလီးကြီးစိုက်ဝင်တာ.. အရမ်းနာတာကြောင့် သူမလည်းသက်သာလိုသက်သာငြား အာရုံပြောင်းအောင် ရှေ့က ဒေါ်ဇင်မာရဲ့စောက်ပတ်အတွင်းသားနဲ့စောက်စိတွေကို အသားကုန်ယက်စုပ်တော့…ဒေါ်ဇင်မာလဲ…အိုးအိုးအင်းအင်း..နဲ့ ဇိမ်တွေ့တဲ့အသံတွေထွက်ပေါ်လာပြီး စောက်ရည်တွေစီးကျလာပါတော့တယ်။ ဦးသိုက်မောင်းကလည်းသူမဖင်ကို သူ့လီးကြီးနဲ့ဆောင့်နေတာကိုလည်း နာနာကျင်ကျင်ခံနေရတဲ့အပြင် ဒေါ်ဇင်မာက… ညဉ်းငါ့ဖင်ကိုပြောင်းယက်ဦးလေ..စောက်ပတ်ကြီးယက်မနေနဲ့…ငါ့ဖင်ကိုသေချာယက်စမ်း.. ကျော့ကျော့လှိုင်ကားသူမဖင်ပေါက်ကိုဦးသိုက်မောင်းချနေတာကို ခံနေရသည့်အပြင် ရှေ့မှာလည်း ဒေါ်ဇင်မာရဲ့ဖင်ကို ယက်ပေးနေရပါတယ်။ ဒေါ်ဇင်မာကတော့ တဟင်းဟင်းနဲ့ ကျော့ကျော့လှိုင်က သူမဖင်ကိုယက်ပေးတဲ့အရသာကို ဇိမ်ခံနေပါတယ်။ ကျော့ကျော့လှိုင်မှာတော့ သူမဖင်ထဲမှ ရရှိနေတဲ့ အနံ့ဆိုးတွေကြောင့် အန်ထွက်မတတ်ခံစားနေရပေမဲ့.သူမငြင်းလို့မရပါဘူး..။ ဦးသိုက်မောင်းကလည်း သူမဖင်ပေါက်လေးကို မညှာမတာလိုးတဲ့အပြင် သူမတင်ပါးကိုပါ လက်ဝါးနဲ့တဖြန်းဖြန်း ရိုက်တာကြောင့် ငိုချင်လာပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းအဖို့တော့ ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့ ဖင်ပေါက်ကိုလိုးရတာ အရမ်းကျပ်တဲ့အတွက် တော်တော်ကောင်းနေပါတယ်။ ဖြန်းဖြန်း…နင့်ဖင်ကိုသေချာထောင်ထားစမ်း…ငါပြီးတော့မယ်… ဦးသိုက်မောင်းရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် ကျော့ကျော့လှိုင်ဖင်ထဲကသွေးစလေးတွေပင်ထွက်လာပါတယ်။ ဒေါ်ဇင်မာကလည်း သွက်သွက်ယက်စမ်းကောင်မ…ငါကောင်းနေပြီ ဖင်ဝကနေအပေါ်က စောက်ပတ်ကိုပါလှမ်းလှမ်းပြီး ယက်လေ..။ ဟင်းဟင်း…အင်းအင်း…ဒေါ်ဇင်မာရဲ့ဖင်ပေါက်ကနေ စောက်ပတ်ထိကုို သူမရဲ့လျှာနဲ့ ယက်တင်ပေးနေရပါသေးတယ်။ အူး…အူး…အင်းအင်း…ကောင်းလိုက်တာ…ဦးသိုက်မောင်းရဲ့ လီးကြီးက သူမဖင်ထဲကမနှုတ်ဘဲ…စိမ်ထားပြီး လရေတွေကို ဖင်ထဲကိုပန်းထုတ်ခြင်းခံရပါတယ်။
အိုးအိုး…ရှိး…အင်း..အင်း….ယက်စမ်း…ကောင်မသွက်သွက်ယက်စမ်း.. အအ…အိုးအိုး…ဒေါ်ဇင်မာကလည်း ကျော့ကျော့လှိုင်ရဲ့လျှာအစွမ်းကိုခံစားရင်း…။ ငယ်သံပါအောင်အော်ဟစ်လို့တစ်ချီပြီးသွားပါတယ်။ ဦးသိုက်မောင်းလည်း မောပန်းသွားလို့ ကျော့ကျော့လှိုင်ဖင်ထဲကသူ့လီးကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့ အချိ်န်မှာ ကျော့ကျော့လှိုင်လဲ နွမ်းနယ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် အိပ်ယာပေါ်မှာ မှောက်ခုံ လဲကျသွားပါတော့တယ်။သူမအဖို့တော့ဒီနေ့ ဦးသိုက်မောင်းတို့လင်မယားအလိုကျ အသုံးတော်ခံလိုက်ရပြီး ဖင်ကိုပါပါကင်ဖွင့်ခြင်းခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ဒေါ်ဇင်မာကကျော့ကျော့လှိုင်နားရွက်ကိုဆွဲလိမ်လိုက်ပြီး ကဲ..ကောင်မ..ညဉ်းအခန်းညဉ်းပြန်လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့်.. ကျော့ကျော့လှိုင်လည်းသူမအခန်းကို တုန်ယင်နေတဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ မနည်းအားယူပြီးပြန်ခဲ့ရပါတယ်။ အနည်းငယ်ခြေဖ၀ါးကကျင်လာတာကြောင့် ကျော့ကျော့လှိုင် အတွေးထဲ မှာနစ်မျှောနေရာကနေသတိပြန်ဝင်လာပါတယ်။ ကောင်လေးကသူမအမိန့်မရသေးတာကြောင့် သူမခြေချောင်းတွေခြေဖ၀ါးတွေကိုယက်စုပ်နေဆဲပါဘဲ။ တော်ပြီ…ရပ်တော့…သူမအမိန့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ကောင်လေးကသူမခြေဖ၀ါးတွေကို ယက်စုပ်ပေးနေတာကို ရပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျော့ကျော့လှိုင်က အိပ်ယာဘေးမှာတပ်ထားတဲ့လူခေါ်ဘဲလ်ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့.. အခန်းဝမှာ လူထွားကြီး တစ်ယောက်ပေါ်လာပါတယ်။ အမကျော့..ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ ကဲဒီကောင့်ကို အချုပ်ခန်းထဲပြန်ထည့်ထားလိုက်တော့။ လူထွားကြီးကကောင်လေးရဲ့လက်တွေ၊ခြေတွေကိုသံကြိုးနဲ့ချည်လိုက်ပြီး…။
ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ ဒီကောင်လေးနာမည်က ထွန်းထွန်းပါ…ဦးသိုက်မောင်းတို့ရဲ့ အချစ်တော်တူလေးပေါ့။ သားသမီးမရှိသဖြင့် ဦးသိုက်မောင်းတို့က ထိုတူလေးကို အမွေစားအမွေခံအဖြစ်မွေးစားပြီး မြို့ကြီးမှာ ကျောင်းထားခဲ့သဖြင့် သူမကတော့ ဦးသိုက်မောင်းအိမ်မှာနေစဉ် ဆုံခွင့်မရခဲ့။ သူမဘ၀ကား ဘယ်အချိန်မှာ လွတ်လပ်ခွင့်ရခဲ့သလဲဆိုတော့..။ ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာတို့အလစ်မှာ သူမထွက်ပြေးရန်အခွင့်သာခဲ့သည်။ ထိုသို့ထွက်ပြေးလာစဉ် ကားတစ်စီးနှင့်တိုက်မိပြီးသူမဆေးရုံရောက်သွားခဲ့သည်။ သူမကိုကားနှင့်တိုက်မိသောသူကမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်သူ ဦးကျောက်လုံးဆိုသူ လူကြီး.။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကို နှစ်သက်စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးလက်ထပ်ယူခဲ့သည်။ ဒီလိုနဲ့ ဦးကျောက်လုံးတစ်ရက်နယ်စပ်မှာ ဆေးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရင်း သူနှင့်အရောင်း အ၀ယ်လုပ်သည့် သူများနှင့် လျင်သူစားစတမ်းလုပ်ကြရာမှ သေဆုံးခဲ့သည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကား အလိုလိုနေရင်းဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့် သူမဘ၀ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သောရန်သူတော် ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျဖျက်ဆီးခဲ့သည့်အပြင်..။ သူမလှလှပပလက်စားချေလို့ရအောင်အကွက်ကျကျဖန်တီးခဲ့တော့သည်။ သူမအမိန့်ပေးသံဆုံးသည်နှင့် လူထွားကြီး(၃)ယောက်က သူတို့အ၀တ်များကို ချွတ်ချလိုက်သည်။ ဦးသိုက်မောင်းကားမကြည့်ရဲသဖြင့်မျက်လုံးမှိတ်ထားသည်။ ကျေျာ့ကျော့လှိုင်က ဦးသိုက်မောင်း ဆံပင်များကို အတင်းဆွဲဆုပ်ပြီး ခေါင်းကို မော့ထားစေသည်။ ကြည့်..ကြည့်…ရှင့်မိန်းမကို ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာ။ ဒေါ်ဇင်မာလည်းတဆတ်ဆတ်တုန်နေပြီ။
ကဲဒေါ်ဇင်မာ ရှင်ရော..ရှင့်ယောင်္ကျားရော အသက်မသေချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့ခိုင်းတာလုပ်ပေးလိုက်။ ကောင်မလာစမ်း…. ဒေါ်ဇင်မာကို လူထွားကြီးတစ်ယောက်က အဖုတ်ထဲကို လီးကိုထိုးထည့်လိုက်သည်။ လီးကြီးကကြီးမားလှသဖြင့်ဒေါ်ဇင်မာကော့တက်သွားသည်။ နောက်တစ်ယောက်ကဒေါ်ဇင်မာဖင်ပေါက်လေးကို လီးနှင့်တေ့နေပြီ…။ မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ…တောင်းပန်ပါတယ်…ဦးသိုက်မောင်းက မျက်ရည်တွေကျပြီး တောင်းပန်ချေပြီ။ သို့သော်ကျော့ကျော့လှိုင်တပည့်လူထွားကြီးများက သူတို့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေသည်။ ဗျစ်…ဒုတ်… အမေရေ…သေပါပြီတော့…ဒေါ်ဇင်မာ၏ငယ်သံပါအောင်အော်ဟစ်သံထွက်ပေါ်လာသည်။ သူမဖင်ထဲရောစောက်ပတ်ထဲပါလီးနှစ်ချောင်းကစိုက်ဝင်နေပြီကိုး။ ဒါပေမဲ့ သူမကြာကြာအော်ခွင့်မရပါ..လူထွားကြီးတစ်ယောက်က သူ့လီးကို ဒေါ်ဇင်မာနှုတ်ခမ်းနှင့်တေ့နေပြီ..။ ကောင်မ…ကောင်းကောင်းစုပ်ပေးလိုက်နော်….ဟင်းဟင်း မဟုတ်ရင်သတ်ပစ်မယ်.. ဒေါ်ဇင်မာကား အသက်သေမှာစိုးသောကြောင့် သူမပါးစပ်ထဲကိုလူထွားကြီးက သူ့လီးကြီးထုတ်သွင်းလုပ်ကာ လိုးနေတာကိုခံနေရတော့သည်။ မိန်းမဖြစ်သူအားသူ့ရှေ့တွင် အပေါက်စုံကို တစ်ပြိုင်ထဲလိုးနေတာကို မြင်နေရတာမြင်သောကြောင့် ဦးသိုက်မောင်းကား အော်ဟစ်ပြီး ငိုယိုတော့သည်။ အုအု…ပါးစပ်ကိုလိုးနေသောလူထွားကြီး၏ လီးက ဒေါ်ဇင်မာ၏အာခေါင်ကိုထောက်ထောက်တာရော အောက်မှ တစ်ပြိုင်ထဲနှစ်ပေါက်လုံးလိုးနေတာကြောင့်ရောနာကျင်မှုကြောင့် ဒေါ်ဇင်မာမျက်ရည်တွေကျနေသော်လည်း ပါးစပ်ကလည်းလိုးခံနေရသောကြောင့် တအုအုအသံသာထွက်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးဒေါ်ဇင်မာ သတိလစ်သွားမှသာ လိုးခိုင်းတာကို ကျော့ကျော့လှိုင်ကရပ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ထွန်းထွန်းကား အချုပ်ခန်းရှေ့တွင်လာရပ်သော ခြေသံကြောင့် အိပ်ပျော်နေရာမှ လန့်နိုးသွားသည်။ အခန်းရှေ့တွင်ကား သခင်မကျော့ကျော့လှိုင်က လာရပ်နေသည်။ အနီရောင်ဝမ်းဆက်ကို ၀တ်ထားသဖြင့် အသားဖြူသော သခင်မကျော့ကျော့လှိုင်ကား အတော်ကြည့်ကောင်းနေသည်။ သူမလက်ထဲတွင်တော့ ခွေးလည်ပတ်သံကြိုးကိုကိုင်ထားသည်။ ဒီနေ့အဖို့တော့ သူမဘာတွေခိုင်းဦးမည်မသိ။ ကဲလာခဲ့…သခင်မကျော့ကျော့လှိုင်ကား သူ့လည်ပင်းကို ခွေးလည်ပတ်တပ်လိုက်သည်။ လည်ပင်းတွင် သံကြိုးတပ်ခံလိုက်ရလျှင် သခင်မကျော့ကျော့လှိုင်ကို ကြောက်သောစိတ်များကသူ့တွင်အလိုလိုဖြစ်ပေါ်နေသည်။
သခင်မကျော့ကျော့လှိုင်က သံကြိုးကိုဆွဲကာ သူ့ရှေ့မှထွက်သွားရာ သူလည်းလေးဖက်ထောက်ပြီး လိုက်သွားရတော့သည်။ သခင်မကျော့ကျော့လှိုင် သူ့ကို ကျွန်လုပ်ထားကတည်းက သူကားကိုယ်လုံးတီးဖြင့် အမြဲနေရသဖြင့် အ၀တ်အစားကိုပင်မေ့သလောက်ဖြစ်နေပြီ။ သူ့လည်ပင်းမှသံကြိုးကိုဆွဲပြီး မြေတိုက်ခန်းရှိရာသို့ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ မြေတိုက်ခန်းက မီးထွန်းထားသဖြင့် လင်းထိန်နေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့်မြေတိုက်ခန်းအလယ်သို့ရောက်လာသည်။ မြေတိုက်ခန်းထဲတွင် သခင်မကျော့ကျော့လှိုင်က အသင့်ချထားသောထိုင်ခုံတစ်လုံးတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်သဖြင့် သူလည်း ဘေးနားတွင် လေးဖက်ထောက်ကာ ခွေးတစ်ကောင်လိုနေနေရသည်။ နင့်ကိုပြရစရာရှိတယ်…ကျော့ကျော့လှိုင်က လက်ခုပ်တီးလိုက်ရာ..အခန်းအလယ်သို့ သံကြိုးများဖြင့် ချုပ်ထားသော အမျိုးသားကြီးတစ်ဦးနှင့်အမျိုးသမီးကြီးနှစ်ဦးကို လူထွားကြီးများကဆွဲခေါ်လာကြသည်။ ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာ။သူ၏မွေးစားမိဘများ။ ဦးလေး..ဒေါ်လေး..သူအံ့သြသွားသည်။ နင်သိပ်အံ့သြမနေပါနဲ့…ဟင်းဟင်း…။ ကျော့ကျော့လှိုင်က ရက်စက်တော့မည့်အပြုံးမျိုးပြုံးလိုက်သည်။ လူထွားကြီးများက ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာကို လေးဖက်ထောက်အနေအထားမျိုး ဖြစ်အောင် တမံတလင်းမှ သံကွင်းများတွင် သေချာခတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက်..ကျော့ကျော့လှိုင်က…ကဲစလိုက်ကြတော့လို့ ဆိုတာနဲ့ လူထွားကြီး(၄)ဦးက သူတို့ဝတ်ထားသော အ၀တ်အစားများကို ချွတ်လိုက်ကြတော့သည်။ မလုပ်..မလုပ်ပါနဲ့..တောင်းပန်ပါတယ်…အီးဟီးဟီး.. ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာက အမျိုးမျိုးတောင်းပန်နေသော်လည်း…လူထွားကြီး(၄)ဦးက ဦးသိုက်မောင်း၊ဒေါ်ဇင်မာတို့၏ နောက်တွင် ၄င်းတို့၏ဖင်ဝကိုနှစ်ယောက်မှလီးတေ့ကာ လိုးရန်တာစူနေသလို ရှေ့တွင်နှစ်ယောက်မှ အသင့်အနေအထားဖြင့်…ပါးစပ်ရှေ့တွင်လီးတယမ်းယမ်းဖြင့် ဒေါ်ဇင်မာတို့လင်မယား ဆံပင်များကို ဆွဲဆုပ်ကခေါင်းကိုမော့ထားစေသည်… အသက်မသေချင်ရင်…ပါးစပ်ဟစမ်း..။
ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာကားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နှင့် ပါးစပ်ကိုဟထားစဉ်… နောက်မှလူထွားကြီး(၂)ဦးက သူတို့ရင်ဖင်ပေါက်များကို လီးဖြင့်တေ့ကာ ထိုးထည့်လိုက်ကြတော့သည်။ အား.ဟ…ဟ..အိုးအိုး. ဒေါ်ဇင်မာအဖို့ဖင်ကိုလိုးခံရသည်မှာ ပထမဆုံးမဟုတ်တော့သဖြင့် မထောင်းသာလှသော်လည်း ဦးသိုက်မောင်းအဖို့ လူထွားကြီး၏ ကြီးမားသောလီးဖြင့်ဖင်ပါကင်ဖွင့်ခြင်းခံလိုက်ရသဖြင့် ဖင်ကို လီးနှင့်ထိုးထည့်နေချိန်တွင် ငယ်သံပါအောင် အော်ဟစ်နေသောအသံမှာမြေတိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးတုန် သွားသည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကား တခစ်ခစ်ရယ်နေသည်။ ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာကား ကြာကြာအော်ခွင့်မရပါ။ သူတို့ပါးစပ်ထဲကို ရှေ့မှလူထွားကြီးများက လီးကိုထိုးထည့်လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းအဖို့ အဆိုပါမြင်ကွင်းကို မြင်ရသည်မှာရင်နာလှသည်။ သခင်မ ကျော့ကျော့လှိုင်၏ ခြေသလုံးကိုဖက်ကာတောင်းပန်တော့သည်။ သခင်မ…မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ…ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ ရပ်လိုက်ပါတော့….သူတို့ကိုလွတ်ပေးပါ….ကျွန်တော်သခင်မခိုင်းတာဘာမဆိုလုပ်ပါ့မယ်။ ကျော့ကျော့လှိုင်ကား ပြုံးနေသည်။သူမလိုချင်တာကဒါပဲလေ။ ထွန်းထွန်းကို ဒါကြောင့် ဒီနေရာကိုခေါ်ပြီး ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ခိုင်းတာ..သူမခိုင်းတာကို မငြင်းဆန်ဘဲလုပ်နိုင်စေဖို့ပင်။ ဟင်းဟင်း..တကယ်ပြောနေတာလား…ငယ်ကျွန်…။ ထွန်းထွန်းကား မျက်ရည်များကျဆင်းလာသည်။ တကယ်ပါ…သခင်မ…သခင်မဘာခိုင်းခိုင်းလုပ်မှာပါ…ဒီဟာကိုရပ်လိုက်ပါတော့။ ကျော့ကျော့လှိုင်က လက်ကာပြလိုက်သဖြင့် လူထွားကြီးများက ဒေါ်ဇင်မာတို့ကိုလိုးနေတာကို ရပ်လိုက်ကြသည်။ ကဲသူတို့နှစ်ယောက်ကို ဒီကိုခေါ်လာခဲ့။ ဥိးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာကို ချုပ်ထားသည်ကိုဖြုတ်ပေးပြီး လူထွားကြီးများက ကျော့ကျော့လှိုင်ရှေုတွင် ဒူးထောက်စေလိုက်သည်။ ကျော့ကျော့လှိုင်က သူမဘေးတွင် ဒူးထောက်နေသော ထွန်းထွန်း၏ ဆံပင်များကိုဆွဲဆုပ်လိုက်ပြီး ကဲ…နင်ငါခိုင်းတာ ဘာမဆိုလုပ်မယ်ဆိုရင်..နင့်ဦးလေးနဲ့နင့်ဒေါ်လေးကို ပြန်လွတ်ပေးလိုက်မယ်…။
မလုပ်ဖူးဆိုရင်တော့…ဟင်းဟင်း။ ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာက မျက်ရည်များစီးကျလာပြီး.ငိုတော့သည်။ သားရယ်…သူခိုင်းတာလုပ်ပေးလိုက်ပါ…ဒေါ်လေးတို့ကိုသနားပါ.။ ထွန်းထွန်းကား မကြည့်ရက်နိုင်တော့သဖြင့် ခေါင်းကို ညိမ့်ပြလိုက်လေတော့သည်။ ကျာ့ကျော့လှိုင်ကား ဦးသိုက်မောင်းနှင့် ဒေါ်ဇင်မာတို့ အိမ်ထဲမှထွက်သွားသည့် မြင်ကွင်းကိုပြနေသည်။ .ကဲ..နင့်ဦးလေးလင်မယားကုို လွတ်ပေးလိုက်တော့မယ်..။ အဲ့တော့ နင်ငါခိုင်းတာလုပ်ဖို့ဘဲလိုတော့တယ်…။ဟုပြောလိုက်သည်။ ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာကား လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိသွားပြီဖြစ်သဖြင့် ၀မ်းသာနေသည်။ ထွန်းထွန်းကား သူမ၏ နောက်တွင် လေးဖက်ထောက်အနေအထားဖြင့် သူမဖင်များကို မော့ကြည့်ကာ မော်ဖူးနေရသည်။ သူ့ဘ၀မှာ ကျော့ကျော့လှိုင်၏ ဖင်နှင့်စောက်ပတ်မှထွက်သည့် အညစ်အကြေးများဖြင့်သာ အသက်ဆက်ရတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ၀မ်းနည်းနေသော်လည်းဦးလေးနှင့်ဒေါ်လေးဖြစ်သူတို့လွတ်မြောက်သွား သဖြင့်ဝမ်းသာမိသည်။ကျော့ကျော့လှိုင်ကား တော်တော်ကိုအားရနေသည်။ ရန်သူတော်ဦးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာတို့၏ မွေးစားသားလေး၏ ပါးစပ်ကို သူမအိမ်သာအဖြစ် ရက်ရက်စက်စက်ကို အသုံးချခွင့်ရပြီဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမကျွန်လေးကိုကြည့်ရသည်မှာ သူ့ဦးလေးနှင့်သူ့အဒေါ်တကယ်လွတ်မြောက်သွားပြီထင်ပြီး ကျေနပ်နေပုံရသည်။ တကယ်တမ်းကတော့…..။ ဥိးသိုက်မောင်းနှင့်ဒေါ်ဇင်မာကို သူမကပြန်လည်ဖမ်းခိုင်းထားသည်။ သူမလူများကိုဖုန်းဆက်ပြီးခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းတွင် သူမလူများက ဖမ်းပြီး ခေါ်ထားပြီးပြီ။ သူမကလည်း ဒေါ်ဇင်မာနှင့်ဦးသိုက်မောင်းကို ဈေးကောင်းကောင်းနှင့်ရောင်းစားဖို့ နိုင်ငံခြားမှပွဲစားများနှင့်ဈေးဆိုင်ထားသည်။ တူ..တူ…သူမလက်ကိုင်ဖုန်းမှအသံမြည်လာသည်။ ဟဲလို…. တစ်ဖက်မှ သူမတပည့်ကျော်အသံထွက်ပေါ်လာသည်။
ဟုတ်ကဲ့..မမ..မမခိုင်းတဲ့အတိုင်းဖမ်းလိုက်ပါပြီ။အေး..ကောင်းတယ်။ သူမကဖုန်းကိုချလိုက်ပြီးစဉ်းစားနေသည်။ ဒေါ်ဇင်မာကိုတော့ အမေရိကန်မှ လူကုန်သည်များကိုရောင်းလိုက်မည်။ ဒေါ်ဇင်မာကို အပြာကားရိုက်သောနေရာမှာကောင်းကောင်းအသုံးချကြမည်ဖြစ်သည်။ ဦးသိုက်မောင်းကိုတော့ ဥရောပမှ သခင်မဇာတ်ကားရိုက်သူများကို ရောင်းမည်။ ထိုသခင်မများကား နှိပ်စက်ညဉ်းပန်းခြင်း ဗွီဒီယိုရိုက်ပြီး အင်တာနက်မှရောင်းနေသူများ။ ဦးသိုက်မောင်းဘ၀တစ်လျှောက် ထိုသခင်မများ၏ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခြင်းကို ကောင်းကောင်းခံစားရတော့မည်လေ။ ဒေါ်ဇင်မာနှင်ဦးသိုက်မောင်းတို့ရဲ့ တူလေး ထွန်းထွန်းကတော့…..။ နောက်တစ်လခန့်အကြာ.. ကျော့ကျော့လှိုင်ကားတရုတ်ပြည်မှ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း၏ အိမ်တွင်အလည်အပတ်ရောက်နေသည်။ သူမနှင့်သန်းသန်းဝင်းကား အလုပ်ကိစ္စများစကားပြောနေသည်။ သေးပေါက်ချင်လာသဖြင့် ချိုဇင်ဝင်းကား အိမ်သာခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်သည်။ အိမ်သာခန်းထဲက အိမ်သာခွက်ပေါ်မှာ သူမအရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိနေသည်။ ထိုသူကား ထွန်းထွန်းပင်… အိမ်သာခွက်ပေါ်တွင် သူ့မျက်နှာကို ပက်လက်လှန်ထားရသည်။ ချိုဇင်ဝင်းက သူမထမိန်ကို မကာ ပင်တီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး သူ့မျက်နှာပေါ်တွင်ခွထိုင်လာသဖြင့် ထွန်းထွန်းကား ပါးစပ်ကို အစွမ်းကုန်ဟထားပေးလိုက်သည်။ ရှုးခနဲ့ချိုဇင်ဝင်း၏အဖုတ်မှသေးများကား သူ့ပါးစပ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည်။ သူလည်းကျင့်သားရနေပြီဖြစ်သဖြင့် ချိုဇင်ဝင်း၏သေးများကို မလွတ်တမ်းသောက်သုံးပေးနေသည်။ နောက်ဆုံးတော့ချိုဇင်ဝင်းကား သေးပေါက်သွားတာရပ်သွားပြီ။ ချိုဇင်ဝင်း၏ အဖုတ်ကိုသေးနံ့ပျောက်သွားအောင်သူ၏လျှာဖြင့်ဆေးကျောပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက်ချိုဇင်ဝင်းကား အပြင်သို့ထွက်သွားချေပြီ.. အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့ အိမ်သာတံခါးကိုဖွင့်သံကြားရပြီး ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းဝင်လာသည်.. ကဲငါရေချိုးမလို့…ရေချိုးခန်းထဲလိုက်လာပြီး ထုံးစံအတိုင်းလုပ်…. သို့နှင့်ရေချိုးခန်းထဲလိုက်သွားပြီး…ရေပန်းဖွင့်ကာရေချိုးနေသော ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း၏ ဖင်ကိုထပ်ကြပ်မကွ သူ၏လျှာဖြင့်လိုက်ယက်ပေးရတော့သည်။
ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းကား ပေါင်ကိုအနည်းငယ်ဟပေးလိုက်ရာ… သူလည်းပေါင်ကြားထဲခေါင်းဝင်ပြီး ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းရဲ့စောက်ပတ်ကို ၀င်ယက်ရပြန်သည်။ အင်း…အင်း..ဆိုသော ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းမှသူ၏လျှာအရသာခံနေသော အသံလေးများထွက်ပေါ်လာသည်။ ထွန်းထွန်းရဲ့ဘ၀ကား ကျော့ကျော့လှိုင်အတွက်သာမက သူမမိတ်ဆွေများဖြစ်သော သန်းသန်းဝင်း၊ချိုဇင်ဝင်းတို့ညီအမအတွက်ပါ ငယ်ကျွန်အဖြစ် အမှုထမ်းနေရတော့သည်။ ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းရေချိုးနေချိန်တွင် ကျော့ျေကျာ့လှိုင်ကား ရေချိုးခန်းအပြင်တွင်ရေချိုးရန်စောင့်နေသည်။ ထွန်းထွန်းအဖို့ကား ဒေါ်သန်းသန်းဝင်းထွက်သွားလျှင်လည်း ကျော့ကျော့လှိုင်ရေချိုး နေချိန်တွင် ဖင်နှင့်စောက်ပတ်များကို လိုက်ယက်ပေးသည့်အမှုတော်ထမ်းရဦးမည်မဟုတ်ပါလား………ပြီးပါပြီ။